MAKA GỊNỊ? - www.yomelijah.com
Isi NchNhr (na Bekee)
Kiswahili Afrikaans አማርኛ Hausa Malagasy Soomaali isiXhosa Yoruba Zulu
Pịa na njikọ ahụ iji lee ngosi vidiyo nke isiokwu na twitter, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ
N'ihi gịnị ka Chineke ji kwere ka nhụjuanya na ajọ omume dịrị?
"Jehova, olee mgbe m ga-etiru mkpu ka i nyere m aka, gị anụ? Olee mgbe m ga-arịọru gị ka ị napụta m n’aka ndị tigbuo zọgbuo, gị anapụta m? Gịnị mere i ji mee ka m na-ahụ ndị na-eme ihe ọjọọ? Gịnịkwa mere i ji hapụ ndị na-emegbu ndị ọzọ? Gịnị mere m ji na-ahụ ndị na-emebisị ihe ndị mmadụ na ndị tigbuo zọgbuo? Gịnịkwa mere e ji na-ese okwu ma na-alụ ọgụ ebe niile? N’ihi ya, o nweghị onye na-edebe iwu, A naghịkwa ekpe ikpe ziri ezi. Ndị ajọ omume gbara ndị ezi omume gburugburu. Ọ bụ ya mere na a naghịzi ekpe ikpe ziri ezi"
"M chebakwaara mmegbu niile a na-emegbu ndị mmadụ n’ụwa* echiche. M hụrụ ka anya mmiri na-agba ndị a na-emegbu emegbu, ma e nweghị onye na-akasi ha obi. Ọ bụkwa ndị nọ n’isi na-emegbu ha, ma e nweghị onye na-akasi ha obi. (...) Ná ndụ a na-enweghị isi m dị, ahụla m ihe niile, ma onye ezi omume nke na-ala n’iyi maka na ọ na-eme ezi omume ma onye ajọ omume nke na-adịte ndụ aka n’agbanyeghị na ọ na-eme ajọ omume. (...) M hụrụ ihe a niile, m wee jiri obi m niile chebara ọrụ niile a rụrụla n’ụwa echiche, n’oge mmadụ nọ na-achị mmadụ ibe ya ọchịchị nchịgbu. (...) E nwere ihe efu na-eme n’ụwa: E nwere ndị ezi omume a na-emeso ka à ga-asị na ha mere ihe ọjọọ, e nwekwara ndị ajọ omume a na-emeso ka à ga-asị na ha mere ihe dị mma. Ana m asị na ihe a bụkwa ihe efu. (...) Ahụla m ka ndị ohu nọ n’elu ịnyịnya, ma ndị isi ejiri ụkwụ na-aga ka ndị ohu"
(Eklisiastis 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)
" N’ihi na e mere ka ihe e kere eke bụrụ ihe efu, ọ bụghị maka na ọ bụ uche ya, kama ọ bụ maka na ọ bụ uche onye mere ka ọ bụrụ ihe efu, ebe ọ bụ na e nwere olileanya"
(Ndị Rom 8:20)
"Ka onye ọnwụnwa bịaara ghara ịsị: “Ọ bụ Chineke na-anwa m.” N’ihi na o nweghị onye nwere ike iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, Chineke anaghịkwa eji ihe ọjọọ anwa onye ọ bụla"
Onye na - akpata nsogbu n’ezie bụ Setan ekwensu, onye nke e kwuru okwu ya na Baibul dị ka onye na-ebo ebubo (Mkpughe 12: 9). Jizọs Kraịst, bụ Ọkpara Chineke, kwuru na ekwensu bụ onye ụgha na ogbu mmadụ (Jọn 8:44). E nwere isi ebubo abụọ:
1 - Ajuju banyere ochichi nke Chineke.
2 - Ajuju banyere iguzosi ike n’ezi ihe nke mmadu.
Mgbe enwere ebubo dị oke njọ, ọ na-ewe ogologo oge tupu ikpe ikpeazụ. Amụma nke Daniel isi nke 7, na-egosi ọnọdụ dị na otu ikpe, nke ọbụbụeze Chineke metụtara, ebe e nwere ikpe: “Ọkụ nke na-asọ asọ ka mmiri si n’ihu ocheeze ya na-asọpụta. Puku kwuru puku ndị mmụọ ozi nọ na-ejere ya ozi, iri puku kwuru iri puku ndị mmụọ ozi guzokwa n’ihu ya. Ụlọikpe a malitere ikpe ikpe, a saghekwara akwụkwọ dị iche iche. (...) Ma Ụlọikpe ahụ malitere ikpe ikpe. Ha wee napụ ya ọchịchị ya, ka e wee laa ya n’iyi ma bibie ya kpamkpam” (Daniel 7:10,26). Dika edere ya n'akwukwo a, ewepuwo gọọmentị nke uwa n'aka Setan na ka ụmụ nwoke. E gosipụtara onyinyo nke ụlọ ikpe a n'Aịsaịa isi 43, ebe edere ya na ndị na-erubere Chineke isi, bụ "ndị akaebe" ya: "Jehova kwuru, sị: “Unu bụ ndị àmà m. N’eziokwu, unu bụ ndị ohu m m họọrọ, Ka unu mara m, nweekwa okwukwe n’ebe m nọ, Ka unu ghọtakwa na anaghị m agbanwe agbanwe. Ọ dịghị Chi dị tupu mụnwa, E wezụgakwa m, e nweghị chi ọzọ dị. Abụ m Jehova. E nweghịkwa onye nzọpụta ọzọ ma e wezụga m”” (Aịzaya 43:10,11). A na-akpọkwa Jizọs Kraịst "onye àmà kwesịrị ntụkwasị obi" nke Chineke (Nkpughe 1:5).
N'ihe banyere ebubo abụọ a siri ike, Jehova Chineke ekwewo ka Setan na ihe a kpọrọ mmadụ nwee oge, ihe karịrị afọ 6,000, ka ha weta ihe akaebe ha, ya bụ ma ha ga-achị ụwa na-enweghị ọbụbụeze Chineke. Anyi no na njedebe nke ahụmahụ a ebe ekpughere ugha nke ekwensu site na onodu ojoo nke mmadu bi na ya (Matiu 24:22). Ikpe na mbibi ga-eme n'oké mkpagbu ahụ (Matiu 24:21; 25:31-46). Ugbu a, ka anyị leba anya na ebubo abụọ ekwensu, na Jenesis isi nke 2 na nke 3, na akwụkwọ Job isi 1 na 2.
1 - Ajuju banyere ochichi nke Chineke
Jenesis isi nke abụọ gwara anyị na Chineke kere mmadụ ma tinye ya “n’ogige” Iden. Adam nọ n’ọnọdụ zuru oke ma nwee nnwere onwe dị ukwuu (Jọn 8:32). Kaosiladị, Chineke setịpụrụ oke: otu osisi: "Jehova Chineke kpọọrọ nwoke ahụ mee ka o biri n’ogige Iden ka ọ na-akọ ihe na ya ma na-elekọta ya. Jehova Chineke nyekwara nwoke ahụ iwu, sị: “I nwere ike iri mkpụrụ nke osisi ọ bụla dị n’ubi a rijuo afọ. Ma erila mkpụrụ si n’osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ, n’ihi na ị ga-anwụrịrị n’ụbọchị i riri mkpụrụ si na ya”” (Jenesis 2:15-17). "Osisi ịma ezi ihe na ihe ọjọọ" bụ naanị ihe nnọchianya nke ezi ihe na ihe ọjọọ. Ugbu a, Chineke kpaara ókè n'etiti "ezi" na nrubeisi, na "ihe ojoo", nnupu isi.
O doro anya na iwu a Chineke nyere esighị ike ndebe (ma e jiri ya tụnyere Matiu 11:28-30 “N’ihi na yok m adịghị mfe, ibu m dịkwa mfe” na 1 Jọn 5:3 “Ihe o nyere n’iwu adịghị arọ”). Site n'ụzọ, ụfọdụ ekwuola na "mkpụrụ osisi amachibidoro" na-anọchi anya inwe mmekọahụ: nke a ezighi ezi, n'ihi na mgbe Chineke nyere iwu a, Iv adịghị adị. Chineke agaghị egbochi ihe Adam amataghị (Tụlee usoro oge nke ihe omume Jenesis 2:15-17 (iwu Chineke) na 2:18-25 (okike Iv).
Ọnwụnwa nke ekwensu
"Agwọ kacha dị akọ n’anụ ọhịa niile Jehova Chineke kere. O wee sị nwaanyị ahụ: “Ọ̀ bụ eziokwu na Chineke sịrị unu erila mkpụrụ si n’osisi ọ bụla dị n’ubi a?” Nwaanyị ahụ wee sị agwọ ahụ: “Anyị nwere ike iri mkpụrụ si n’osisi ndị dị n’ubi a. Ma Chineke gwara anyị gbasara mkpụrụ si n’osisi dị n’etiti ubi a, sị: ‘Unu erila mkpụrụ si na ya, unu emetụkwala ya aka ka unu ghara ịnwụ.’” Agwọ ahụ sịziri nwaanyị ahụ: “Unu agaghị anwụ. N’ihi na Chineke ma na n’ụbọchị unu riri mkpụrụ si na ya, anya unu ga-emeghe, unu adị ka Chineke, mara ihe ọma na ihe ọjọọ.” Nwaanyị ahụ wee hụ na mkpụrụ osisi ahụ dị mma oriri nakwa na ọ na-agụ agụụ ma e lee ya anya. N’eziokwu, osisi ahụ mara mma ile anya. Nwaanyị ahụ wee ghọrọ mkpụrụ ya rie. Mgbe e mechara, o nyetụrụ di ya mgbe ya na ya nọ, di ya erie" (Jenesis 3:1-6).
Gịnị mere Setan ji gwa Iv okwu? Edere ya: “Ọ bụghịkwa Adam ka a ghọgburu, kama, ọ bụ Iv ka a ghọgburu kpamkpam, ya emebie iwu Chineke” (1 Timoti 2:14). N'ihi Gịnị Ka E Ji Duhie Iv? N'ihi ntorobịa ya, ebe Adam dịkarịa ala iri anọ. Ma, Adam ma ihe ọ na-eme, ọ kpachaara anya mee mmehie. Ebubo mbụ a nke ekwensu, bụ mbuso agha megide ọbụbụeze nke Chineke (Nkpughe 4:11).
Ikpe na nkwa Chineke
Esisịt ini mbemiso utịt usen oro, mbemiso utịn osop, Abasi ama ebiere ikpe esie (Genesis 3: 8-19). Mbemiso ẹkebierede ikpe, Jehovah Abasi ama obụp mbụme. Nke a bụ azịza ya: "Nwoke ahụ sịrị: “Ọ bụ nwaanyị ahụ ị kpọnyere m ka mụ na ya biri. O nyere m mkpụrụ si n’osisi ahụ, mụ erie.” Jehova Chineke wee sị nwaanyị ahụ: “Gịnị bụ ihe a i mere?” Nwaanyị ahụ zara, sị: “Agwọ ahụ duhiere m, m wee rie mkpụrụ osisi ahụ”" (Jenesis 3:12,13). Adam na Iv ekwupụtaghị ikpe ọmụma ha, ha nwara igosi na ha bụ ndị ezi omume. Na Jenesis 3:14-19, anyị nwere ike ịgụ ikpe Chineke na nkwa nke mmezu nke nzube ya: "M ga-eme ka gị na nwaanyị ahụ dịrị n’iro, meekwa ka nwa gị na nwa ya dịrị n’iro. Nwa ya ga-egwepịa gị isi, ị ga-emerụkwa ya ahụ́ n’ikiri ụkwụ” (Jenesis 3:15). Site na nkwa a, Jehova Chineke kwuru na nzube ya ga-emezu, nakwa na a ga-ebibi Setan Ekwensu. Site n'oge ahụ gawa, mmehie batara n'ụwa, ya na nsonazụ ya bụ ọnwụ: "N’ihi ya, otú ahụ mmehie si n’aka otu mmadụ bata n’ụwa, ọnwụ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee gbasaa ruo mmadụ niile n’ihi na ha niile mehiere” (Ndị Rom 5:12).
2 - Ajuju banyere iguzosi ike n’ezi ihe nke mmadu
Ekwensu kwuru na enwere ntụpọ n’okike mmadụ. Nke a bu ebubo ekwensu megide iguzosi ike n'ezi ihe nke Job: "Jehova wee sị Setan: “Olee ebe i si bịa?” Setan zara Jehova, sị: “M nọ na-akpagharị n’ụwa, na-agagharịkwa n’ime ya.” Jehova wee sị Setan: “Ì leruola ohu m Job anya? Ị̀ hụla na e nweghị onye dị ka ya n’ụwa? Ọ bụ onye ezi omume nke na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta. Ọ na-atụ egwu Chineke, ọ naghịkwa etinye aka n’ihe ọjọọ.” Setan wee sị Jehova: “Ọ̀ bụ n’efu ka Job na-atụ egwu Chineke? Ọ̀ bụ na ị naghị echebe ya na ụlọ ya na ihe niile o nwere? Ị gọziela ọrụ niile ọ na-arụ, meekwa ka anụ ụlọ ya ju ebe niile. Ma, ọ bụrụ na ị ga-amatị aka gị ugbu a napụ ya ihe niile o nwere, ọ ga-ekwujọ gị n’ihu gị.” Jehova sịziri Setan: “Lee, ihe niile o nwere dị gị n’aka. Ma, emetụla yanwa aka.” Setan wee si n’ihu Jehova pụọ. (…) Jehova wee sị Setan: “Olee ebe i si bịa?” Setan zara Jehova, sị: “M nọ na-akpagharị n’ụwa, na-agagharịkwa n’ime ya.” Jehova wee sị Setan: “Ì leruola ohu m Job anya? Ị̀ hụla na e nweghị onye dị ka ya n’ụwa? Ọ bụ onye ezi omume nke na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta. Ọ na-atụ egwu Chineke, ọ naghịkwa etinye aka n’ihe ọjọọ. Ọ ka kwụsiri ike n’ebe m nọ+ n’agbanyeghị na ị na-agbalị ime ka m laa ya n’iyi ọ bụ eziokwu na e nweghị ihe o mere.” Ma Setan gwara Jehova, sị: “Mmadụ nọrọ n’ọnụ ọnwụ, ọ ga-enye* ihe niile o nwere ka ọ zọọ ndụ* ya. Ma, ọ bụrụ na ị ga-amatị aka gị ugbu a mee ka ọ rịawa ọrịa, ọ ga-ekwujọ gị n’ihu gị.” Jehova sịziri Setan: “Lee, ọ nọ gị n’aka. Ma, egbula ya egbu”" (Job 1:7-12; 2:2-6).
Mmejọ nke mmadụ, dika Setan bu ekwensu si di, obu na o na-efe Chineke, obughi n'ihi ihunanya ya, kama n'ihi ochicho nke onwe. N’okpuru nkpagbu, site na itufu ihe onwunwe ya ma site n’egwu nke onwu, ma dika Ekwensu bu Ekwensu si kwuo, mmadu apughi iguzosi ike n’ebe Chineke no. Ma Job gosipụtara na Setan bụ onye ụgha: Job tufuru ihe niile o nwere, ụmụ ya 10 nwụrụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ site n'ọrịa (Job 1 na 2). Ndi enyi ugha ato akpatala mgbu Job, na-ekwu na nsogbu ya nile sitere na nmehie zoro ezo, ya mere Chineke na-ata ya ahuhu maka nmebi iwu. Ma Job ahapụghị iguzosi ike n'ezi ihe ya wee zaa, sị: "Agaghị m anwa anwa kpọọ unu ndị ezi omume. Ruo mgbe m nwụrụ, m ga-ejisi Chineke aka ike” (Job 27:5).
Otu osinadị, ọdịda ekwensu kachasị dapụtara, gbasara iguzosi ike n'ezi ihe nke mmadụ, bụ mmeri nke Jizọs Kraịst onye rubeere Chineke isi, ọbụna ruo ọnwụ: "Mgbe ọ ghọrọ mmadụ, o weturu onwe ya ala ma rube isi ruo ọnwụ, ya bụ, ọnwụ ọ nwụrụ n’osisi ịta ahụhụ” (Ndị Filipaị 2:8). Jizọs Kraịst, site n'iguzosi ike n'ezi ihe ya, nyere Nna ya mmeri dị oke ọnụ nke mmụọ, ọ bụ ya mere e ji kwụghachi ya ụgwọ: "Ọ bụ ya mere Chineke ji bugoo ya n’ọkwá ka elu, jirikwa obiọma nye ya aha karịrị aha ọ bụla ọzọ, ka ikpere niile wee gbuo n’ala n’aha Jizọs, ma nke ndị nọ n’eluigwe ma nke ndị nọ n’ụwa ma nke ndị nọ n’ime ala, ka ire ọ bụla wee kwupụtakwa na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto” (Ndị Filipaị 2:9-11).
N'ihe atụ nke nwa mmefu, Jizọs Kraịst na-enye anyị nghọta ka mma banyere ụzọ Nna ya si eme omume mgbe a na-enyoba ikike nke Chineke nwa oge (Luk 15:11-24). Nwa ahụ rịọrọ nna ya ihe nketa ya ma hapụ ụlọ ahụ. Nna ahụ kwere ka nwa ya nwoke onye bu dimkpa mee mkpebi a, kama ọ ga-ebukwa nsonaazụ ya. N'otu aka ahụ, Adam jiri nnwere onwe ya mee nhọrọ, mana ọ tara ahụhụ si na ya pụta. Nke na-ewetara anyị n'ajụjụ na-esonụ banyere nhụjuanya nke ihe a kpọrọ mmadụ.
Ihe na-akpata ahụhụ
Ahụhụ nwere isi ihe anọ
1 - Ekwensu bụ onye na-akpata nhụjuanya (ma ọ bụghị mgbe niile) (Job 1:7-12; 2:1-6). Dị ka Jizọs Kraịst si kwuo, Setan bụ onye na-achị ụwa a: "A na-ekpe ụwa a ikpe ugbu a. Ugbu a, a ga-achụpụ+ onye na-achị ụwa a" (Jọn 12:31; 1 Jọn 5:19). Nke a mere na ndi mmadu n’ozuzu anaghi enwe obi uto: “N’ihi na anyị ma na ihe niile e kere eke na-asụkọ ude ọnụ, nọrọkwa n’ihe mgbu ruo ugbu a” (Ndi Rom 8:22).
2 - Nhụjuanya bụ ihe si n ofọnọdụ anyị nke onye mmehie pụta, nke na-edugakwa anyị n’agadi, nrịanrịa na ọnwụ: "N’ihi ya, otú ahụ mmehie si n’aka otu mmadụ bata n’ụwa, ọnwụ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee gbasaa ruo mmadụ niile n’ihi na ha niile mehiere. (…) N’ihi na ụgwọ ọrụ mmehie na-akwụ bụ ọnwụ” (Ndi Rom 5:12; 6:23).
3 - Nhụjuanya nwere ike ịbụ nsonaazụ nke mkpebi ọjọọ (n'aka anyị ma ọ bụ nke ụmụ mmadụ ndị ọzọ): "N’ihi na anaghị m eme ihe dị mma m na-achọ ime, kama ọ bụ ihe ọjọọ m na-achọghị ime ka m na-eme" (Deuterọnọmi 32:5; Ndị Rom 7:19). Nhụjuanya abụghị nsonaazụ nke "iwu karma". Nke a bụ ihe anyị nwere ike ịgụ na Jọn isi 9: "Mgbe ọ na-agafe, ọ hụrụ otu nwoke kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya. Ndị na-eso ụzọ ya wee jụọ ya, sị: “Onye Ozizi, ònye mehiere? Ọ̀ bụ nwoke a, ka ọ̀ bụ ndị mụrụ ya, nke mere o ji kpuo ìsì mgbe a mụrụ ya?” Jizọs zara, sị: “Ma nwoke a ma ndị mụrụ ya emehieghị, kama ọ bụ ka e si n’ihe mere ya mee ka ọrụ Chineke pụta ìhè” (Jọn 9:1-3). "Ọrụ Chineke", ga-abụ ọrụ ebube iji gwọọ onye ìsì ahụ.
4 - Nhụjuanya pụrụ ịbụ ihe si na ya pụta nke "oge a na-atụghị anya ya na ihe omume", nke na-eme ka mmadụ nọrọ n'ebe na-ekwesịghị ekwesị n'oge na-ekwesịghị ekwesị: "Ihe ọzọ m hụrụ nke na-eme n’ụwa bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ndị nwere ụkwụ ọsọ na-emeri n’ọsọ. Ọ bụghị mgbe niile ka ndị dike na-emeri n’agha. Ọ bụghị mgbe niile ka ndị ma ihe na-enweta ihe oriri. Ọ bụghị mgbe niile ka ndị ụbụrụ na-aghọ nkọ na-akpata akụnụba. Ọ bụghịkwa ndị mụtara ihe ka ihe na-agaziri mgbe niile, n’ihi na ọdachi na-abịara ha niile n’oge a na-atụghị anya ya. N’ihi na mmadụ amaghị oge ihe ọjọọ ga-abịara ya. Otú ahụ ụgbụ si ejide azụ̀, ọnyà ana-amakwa nnụnụ, ka mmadụ si abanye ná nsogbu n’oge ọdachi dakwasịrị ya, mgbe ọ dakwasịrị ya na mberede" (Eklisiastis 9:11,12).
Nke a bụ ihe Jizọs Kraịst kwuru banyere ọdachi abụọ mere nke gburu ọtụtụ mmadụ: “N’oge ahụ, ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ kọọrọ Jizọs gbasara ndị Galili Paịlet gburu ebe ha na-achụ àjà. 2 Ma, ọ sịrị ha: “Ùnu chere na ndị Galili ahụ mekarịrị ndị Galili ndị ọzọ niile ná mmehie n’ihi ihe a mere ha? Ana m asị unu, mba. Ma, a ga-ebibi unu niile otú e bibiri ha ma ọ bụrụ na unu echegharịghị. Ka ùnu chere na mmadụ iri na asatọ ahụ ụlọ elu dị na Siloam dagburu mekarịrị ndị ọzọ niile bi na Jeruselem ná mmehie? Ana m asị unu, mba. Ma, a ga-ebibi unu niile otú e bibiri ha ma ọ bụrụ na unu echegharịghị”” (Luk 13:1-5). O nwetụbeghị mgbe Jizọs Kraịst kwuru na ndị nwere ihe ọghọm ma ọ bụ ọdachi ndị na-emere onwe ha gaara emehie karịa ndị ọzọ. Ọ bụghị Chineke na-eme ka ụdị ihe a taa ndị mmehie ahụhụ. Ma ọ bụ ọrịa, ihe mberede ma ọ bụ ọdachi ndị na-emere onwe ha, ọ bụghị Chineke na-eme ha.
Chineke ga-eme ka ahụhụ niile a kwụsị: "M wee nụ ka otu oké olu si n’ocheeze ahụ sị: “Ụlọikwuu nke Chineke dị ebe ụmụ mmadụ nọ. Ha na Chineke ga-ebikwa. Ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile dị ha n’anya. Ọnwụ agaghịzi adị. Iru uju ma ọ bụ ibe ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịzi adị. Ihe mbụ niile agafeela”” (Mkpughe 21:3,4).
"Akara Aka" abughi nkuzi nke Baibul. Emeghi ka anyi “kara aka” ime ihe oma ma obu ihe ojoo, kama dika “nhọrọ efu” anyi hoputara ime ihe oma ma obu ihe ojoo (Deuteronomi 30:15). Echiche a banyere akara aka na echiche ọtụtụ ndị nwere banyere ikike Chineke ịma ihe ga-eme n’ọdịnihu nwere njikọ chiri anya. Anyị ga-ahụ otú Chineke si eji ike ya amata ihe ga-eme n’ọdịnihu site na otutu omuma atu nke Baibul.
Chineke ji ike ya mara ihe ga-eme n'ọdịnihu, ezi uche na nhọrọ
Chineke ọ maara na Adam na-aga imehie? Site na Jenesis 2 na 3, ee e. Chineke adịghị enye iwu, mgbe ọ maara tupu oge eruo na a gaghị erubere ya isi. Nke a megidere ịhụnanya (1 John 4:8; 5:3). Lee ihe omuma atu abua nke Akwukwo nso ndi n’egosiputa na Chineke ji ikike ya ima ihe di n’iru na uzo nke ezi uche. Ma kwa, na Ọ na-eji ike a eme ihe maka nzube ụfọdụ.
Were Abraham dị ka ihe atụ. Na Jenesis 22:1-14, Chineke gwara Ebreham ka o were nwa ya nwoke Aịzik chụọ àjà. Chineke o bu ụzọ mara na Ebreham ga-erubere ya isi? Dabere na ozugbo ndabere nke akụkọ, ọ dịghị. N'ikpeazụ Chineke gwara Ebreham ka ọ ghara ime ya: “O wee sị ya: “Emerụla nwa ahụ ahụ́, emekwala ya ihe ọ bụla, n’ihi na amatala m ugbu a na ị na-atụ egwu Chineke ebe ọ bụ na ị jụghị inye m nwa gị nwoke, bụ́ otu mkpụrụ nwa ị mụrụ” (Jenesis 22:12). Edere ya "n’ihi na amatala m ugbu a na ị na-atụ egwu Chineke". Okwu a “ugbua” n’egosiputa na Chineke amaghi ma Abraham o ga-erube n’ariri a.
Ihe atụ nke abụọ metụtara mbibi nke Sọdọm na Gọmọra. Eziokwu ahụ bụ na Chineke zipụrụ ndị mmụọ ozi abụọ ka ha hụ ọnọdụ ọjọọ, na-egosiputa ozo na mbu, O nweghi ihe akaebe nile iji mee mkpebi, na nke a, O jiri ikike ya imata site n'aka ndi mmuo ozi abuo (Jenesis 18:20,21).
Ọ bụrụ na anyị agụọ akwụkwọ amụma dị iche iche nke Akwụkwọ Nsọ, anyị ga-ahụ nke ahụ Chineke na-eji ikike ya amata ọdịnihu mgbe nile, maka otu nzube a kapịrị ọnụ. Iji maa atụ, ebe Rebecca dị ime ejima, nsogbu bụ nke n’ime ụmụ abụọ ahụ ga-abụ nna nna nke mba Chineke họọrọ (Jenesis 25:21-26). Ọ bụ Jehova Chineke mere ya a mfe mkpụrụ ndụ ihe nketa chọpụtara nke Isọ na Jekọb: "Ị hụdịrị m mgbe m na-akabeghị aka n’afọ nne m. E dere ihe niile dị m n’ahụ́ n’akwụkwọ gị. E dedịrị mgbe e kere ha Tupu nke ọ bụla n’ime ha adịrị" (Abù Ọma 139:16). Dabere na ihe ọmụma a, Chineke họọrọ (Ndị Rom 9:10-13; Ọrụ 1:24-26 "Gị, Jehova, onye maara obi mmadụ niile").
Chineke Ọ̀ Na-echebe Anyị?
Tupu anyị aghọta echiche Chukwu gbasara nchekwa anyị, ọ dị mkpa ịtụle isi ihe atọ dị mkpa n’Akwụkwọ Nsọ (1 Ndị Kọrịnt 2:16):
1 - Jisos Kraist gosiputara na ndu di ugbua, nke ngbaru onwu, nwere ihe diri nwa oge nye mmadu nile (Jon 11:11 (akowara onwu Lazarọs dika “ura”)). Nke ozo, Jisos Kraist gosiri na ihe di nkpa bu olile anya nke ndu ebighebi (Matiu 10:39). P ol onyeozi gosiputara na “ndụ n'ezie” bu olile anya nke ndu ebighebi (1Timoti 6:19).
Mgbe anyị gụrụ akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, anyị na-ahụta na oge ụfọdụ, Chineke anaghị echebe onye na-ejere ya ozi ka ọ ghara ịnwụ, n’ihe banyere Jems na Stivin (Ọrụ 7:54-60; 12:2). N’ọnọdụ ndị ọzọ, Chineke kpebiri ichebe ohu Ya. Iji maa atụ, mgbe Jemes nwụsịrị, Chineke kpebiri ichebe Pita ka ọ ghara (Ọrụ 12: 6-11). N'ikwu okwu n'ozuzu, na ọnọdụ Akwụkwọ Nsọ, nchebe nke ohu Chineke na-ejikọkarị na nzube ya. Dika ima atu, nchebe nke Pol onye ozi nwere ebum n’uche di elu: obu ikwusa ndi eze ozioma (Olu 27: 23,24; 9: 15,16).
2 - Anyi aghaghi itinye ajuju a banyere nchebe nke Chineke, n’onodu ihe ima aka abuo nke ekwensu ma karisia okwu banyere Job: “Ọ̀ bụ na ị naghị echebe ya na ụlọ ya na ihe niile o nwere? Ị gọziela ọrụ niile ọ na-arụ, meekwa ka anụ ụlọ ya ju ebe niile" (Job 1:10). Iji zaa ajụjụ nke iguzosi ike n’ezi ihe, Chineke kpebiri iwepụ nchebe ya n’ebe Job nọ, tinyere ihe nile a kpọrọ mmadụ. Obere oge tupu ọ nwụọ, Jizọs Kraịst, na-ehota Abụ Ọma 22:1, gosipụtara na Chineke ewepụla nchebe niile n'aka ya, nke kpatara ọnwụ ya dị ka àjà (John 3: 16; Matiu 27: 46). Ka o sina dị, banyere ihe a kpọrọ mmadụ n’ozuzu, enweghị nke a nke nchekwa Chineke abụghị nke zuru ezu, n’ihi na dịka Chineke machibidoro ekwensu igbu Job, o doro anya na ọ bụ otu ihe ahụ maka ụwa niile Mmadụ (jiri ya tụnyere Matiu 24:22).
3 - Anyị hụrụ n’elu, na nhụjuanya nwere ike ịbụ ihe si na “oge na ihe ndapụta” nke pụtara na ndị mmadụ nwere ike ịnọ n’oge adịghị mma, n’ebe na-ekwesịghị ekwesị (Eklisiastis 9: 11,12). Ntem, owo isiwakke ndikpeme mme owo nsio ke utịp edimek oro Adam akanamde. Nwoke ahụ mere agadi, na-arịa ọrịa ma nwụọ (Ndi Rom 5:12). O nwere ike ibu onye ihe mberede ma obu odachi okike bia (Ndi Rom 8:20; akwukwo Eklisiastis nwere nkowa zuru oke banyere ihe efu nke ndu nke di ugbu a na-eduga n'ọnwu: "Onye mkpọkọta kwuru, sị: “Ihe niile bụ nnọọ ihe efu! Ihe niile bụ nnọọ ihe efu! E nweghị ihe nwere isi!”" (Eklisiastis 1:2).
Ọzọkwa, Chineke adịghị echebe ụmụ mmadụ pụọ na nsonaazụ nke mkpebi ha dị njọ: "Unu ekwela ka e duhie unu: Chineke abụghị onye a ga-aghọgbuli. N’ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha ka ọ ga-aghọrọ; n’ihi na onye na-agha mkpụrụ otú ahụ́ ya chọrọ ga-esi n’ahụ́ ya ghọrọ mbibi, ma onye na-agha mkpụrụ otú mmụọ nsọ chọrọ ga-esi ná mmụọ nsọ ghọrọ ndụ ebighị ebi” (Ndị Galeshia 6:7,8). Oburu na Chinekerapuru mmadu ihe efu rue oge di anya, oputara ka ayi ghota na O wezugala nchedo Ya site na nsogbu nke nmehie ayi. N'ezie, ọnọdụ a dị ize ndụ nye mmadụ niile ga-adị nwa oge (Ndị Rom 8:21). Mgbe ekwesịrị idozi ebubo ekwensu, ụmụ mmadụ ga-enwetaghachị ezigbo nchedo Chineke n’elu ụwa (Abụ Ọma 91:10-12).
Nke a ọ pụtara na ugbu a, Chineke anaghịzi echebe anyị n'otu n'otu? Nchebe nke Chineke na-enye anyị bụ nke ọdịnihu ebighi ebi, n'ihe gbasara olile anya nke ndụ ebighi ebi, ọ bụrụ na anyị atachie obi ruo ọgwụgwụ (Matiu 24:13; Jọn 5:28,29; Ọrụ 24:15; Mkpughe 7:9-17). Na mgbakwunye, Jizọs Kraịst na nkọwa ya nke ihe ịrịba ama nke ụbọchị ikpeazụ (Matiu 24, 25, Mak 13 na Luk 21), na akwụkwọ Mkpughe (ọkachasị n'isi 6:1-8 na 12:12), gosiri na ndi mmadu ga-enwe nsogbu ojoo di egwu kemgbe 1914, nke n’egosiputa nke oma na nwa oge Chineke agaghi echebe ya. Kaosinadị, Chineke emewo ka o kwe anyị omume ichebe onwe anyị n'otu n'otu site na itinye ụkpụrụ ọma ya nke dị n'ime Akwụkwọ Nsọ, Okwu Ya n'ọrụ. N'ikwu okwu sara mbara, itinye ụkpụrụ Akwụkwọ Nsọ n'ọrụ na-enyere aka izere ihe egwu ndị na-enweghị isi nwere ike ime ka ndụ anyị dị mkpụmkpụ n'ụzọ nzuzu (Ilu 3: 1,2). Yabụ, itinye ụkpụrụ Akwụkwọ Nsọ n'ọrụ, ntuziaka nke Chukwu, ga-adị ka ile anya nke ọma n'aka nri na aka ekpe tupu ịgafe n'okporo ámá, iji chekwa ndụ anyị (Ilu 27:12).
Na mgbakwunye, Pita onyeozi kwusiri ike na ọ dị mkpa ikpe ekpere: "Ma ọgwụgwụ ihe niile adịla nso. N’ihi ya, na-elenụ ihe anya otú dị mma, na-ekpekwanụ ekpere mgbe niile" (1 Pita 4:7). Ekpere na ntụgharị uche nwere ike ichebe nguzo nke mmụọ na nke uche anyị (Ndị Filipaị 4:6,7; Jenesis 24:63). Fọdụ kwenyere na Chineke chebere ha n'oge ụfọdụ na ndụ ha. Ọ dịghị ihe ọ bụla dị na Akwụkwọ Nsọ nke na-egbochi ka a hụ ụdị ohere a: "Onye m chọrọ imere amara ka m ga-emere amara. Onye m chọkwara imere ebere ka m ga-emere ebere" (Ọpụpụ 33:19). Anyị ekwesịghị ikpe ikpe: "Ònye ka ị bụ na ị ga na-ekpe onye na-ejere onye ọzọ ozi ikpe? Ọ bụ Chineke bụ́ nna ya ukwu ga-ekpebi ma ihe ọ na-eme ọ̀ dị mma ka ọ̀ dị njọ. N’eziokwu, ebe Jehova na-enyere ya aka, ihe ọ na-eme ga-adị ya mma" (Ndị Rom 14:4).
Brothermụnna na inyere ibe unu aka
Tupu nhụjuanya ahụ agabiga, anyị ga-ahụrịrị onwe anyị n'anya ma nyere ibe anyị aka, iji belata nhụjuanya gbara anyị gburugburu: "Ana m enye unu iwu ọhụrụ, ka unu hụ ibe unu n’anya. Otú m hụrụ unu n’anya, hụnụ ibe unu n’anya otú ahụ. Ọ bụrụ na unu hụrụ ibe unu n’anya, mmadụ niile ga-eji ya mata na unu bụ ndị na-eso ụzọ m” (Jọn 13:34,35). Onye na-eso ụzọ Jems, onye otu nne ji ya na Jizọs Kraịst, dere nke ọma na a ga-egosipụta ụdị ịhụnanya a site n'omume iji nyere onye agbata obi anyị nọ na nsogbu aka (James 2:15,16). Jizọs Kraịst kwuru na-enyere ndị na-enweghị ike iweghachiri anyị ya (Luk 14: 13,14). N'ime ime nke a, n'ụzọ, anyị "ka anyị gbazinye" na Jehova ọ ga-akwụghachi anyị ya okpukpu narị (Ilu 19:17).
Ọ bụ na-akpali ịgụ ihe Jizọs Kraịst kọwara dịka ebere nke ga - enyere anyị aka inweta ndụ ebighi ebi: "N’ihi na agụụ gụrụ m, unu enye m nri ka m rie. Mmiri gụrụ m, unu ekunye m mmiri ka m ṅụọ. Abụ m ọbịa, unu anabata m nke ọma. Agba m ọtọ, unu eyiwe m uwe. Arịara m ọrịa, unu elekọta m. Anọ m n’ụlọ mkpọrọ, unu abịa leta m.’" (Matiu 25: 31-46). Okwesiri ighota na n'ime omume ndia nile odighi oru obula apuru iburu "ndi okpukpe". N'ihi gịnị? Ọtụtụ mgbe, Jizọs Kraịst kwuru ndụmọdụ a ọzọ, "Achọrọ m ebere, ọbụghị ịchụ àjà" (Matiu 9:13; 12:7). Isi okwu a pụtara “ebere” bụ ọmịiko n ’ọrụ (nke pụtara warara bụ mgbaghara). Hụ onye nọ ná mkpa, ma ànyị ma ha ma ọ bụ na anyị amaghị, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ime otu ahụ, anyị ga-enyere ha aka (Ilu 3:27,28).
Àjà ahụ na-anọchi anya ọrụ ime mmụọ metụtara ofufe Chineke. Ya mere o doro anya na mmekọrịta anyị na Chineke kachasị mkpa. Otu o sina dị, Jizọs Kraịst katọrọ ụfọdụ ndị ha na ya dịkọrọ ndụ bụ ndị ji ịchụ akụ nke “ịchụ aja” akwadoghị nne na nna ha mere agadi (Matiu 15:3-9). Ọ dị mma ịmara ihe Jizọs Kraịst kwuru banyere ndị na-agaghị eme uche Chineke: "Ọtụtụ mmadụ ga-asị m n'ụbọchị ahụ: "Ọtụtụ mmadụ ga-asị m n’ụbọchị ahụ: ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ọ̀ bụ na anyị ebughị amụma n’aha gị, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ n’aha gị, rụọkwa ọtụtụ ọrụ ebube n’aha gị?’” (Matiu 7:22). Ọ bụrụ na anyị jiri Matiu 7:21-23 tụnyere 25:31-46 na Jọn 13:34,35, anyị ga-aghọta na “ịchụ aja” na ebere, bụ ihe abụọ dị oke mkpa (1 Jọn 3:17,18; Matiu 5:7).
Chineke ga-agwo ụmụ mmadụ
Nye ajụjụ nke onye amụma Habakuk (1:2-4), banyere ihe mere Chineke ji kwere ka nhụjuanya na ajọ omume dịrị, azịza ya bụ nke a: "Jehova wee sị m: “Dee ọhụụ a edee, depụtakwa ya nke ọma n’elu mbadamba nkume, Ka o wee dịrị onye na-agụpụta ya mfe ọgụgụ. N’ihi na ọhụụ a ga-emezu n’oge a kara aka. Oge ọ ga-emezu jikwa ọsọ na-eru. Ọ gaghịkwa agha ụgha. Ọ bụrụgodị na o gbuo oge, na-atụ anya ya. N’ihi na ọ ga-emezurịrị. Ọ gaghị anọ ọdụ"” (Habakọk 2:2,3). Ndị a bụ ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke "ọhụụ" nke olileanya dị nso n'ọdịnihu ndị na-agaghị anọ ọdụ:
"Ahụkwara m eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, n’ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ alaala n’iyi, oké osimiri adịghịkwa. Ahụkwara m obodo nsọ ahụ, bụ́ Jeruselem Ọhụrụ, ka o si n’eluigwe, ebe Chineke nọ, na-agbadata. E jikeere ya otú e si ejike nwaanyị a na-alụ ọhụrụ nke a chọrọ mma ka ọ gaa zute di ya. M wee nụ ka otu oké olu si n’ocheeze ahụ sị: “Ụlọikwuu nke Chineke dị ebe ụmụ mmadụ nọ. Ha na Chineke ga-ebikwa. Ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile dị ha n’anya. Ọnwụ agaghịzi adị. Iru uju ma ọ bụ ibe ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịzi adị. Ihe mbụ niile agafeela”" (Mkpughe 21:1-4).
"Anụ ọhịa wolf na nwa atụrụ ga-anọkọ n’udo. Agụ owuru na nwa ewu ga-amakpukọkwa. Nwa ehi na ọdụm na anụ gbara agba ga-anọkọkwa. Nwatakịrị ga na-edukwa ha. Nne ehi na anụ ọhịa bea ga-atakọ ahịhịa. Ụmụ ha ga-amakpukọkwa. Ọdụm ga-ata okporo ọka dị ka ehi. Nwa na-aṅụ ara ga-egwuri egwu n’ọnụ agwọ ubí nọ, Nwatakịrị a kwụsịrị ara ga-atụkwasịkwa aka ya n’ọnụ agwọ ọjọọ nọ. Ha agaghị emerụ ihe ọ bụla ahụ́, Ha agaghịkwa emebi ihe ọ bụla n’ugwu m niile dị nsọ, N’ihi na amamihe gbasara Jehova ga-ejupụta ụwa Otú mmiri si ejupụta oké osimiri" (Aịzaya 11: 6-9).
"Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, Megheekwa ntị ndị ntị chiri. Mgbe ahụ ka onye ngwọrọ ga-awụli elu ka mgbada. Onye ogbi ga-etikwa mkpu ọṅụ. Mmiri ga na-agbapụta n’ala ịkpa. Iyi ga na-asọkwa n’ọzara. Ala kpọrọ nkụ ga-adị ka ọdọ mmiri nke ahịhịa amị juru. Ala mmiri na-adịghị ga-adịkwa ka isi mmiri. Ahịhịa ndụ na ahịhịa amị na ahịhịa papaịrọs Ga-adị n’ebe nkịta ọhịa na-ebi, n’ebe ha na-anọkwa ezu ike" (Aịzaya 35:5-7).
"A gaghịzi enwe nwa ọhụrụ ga-anọ naanị ụbọchị ole na ole nwụọ n’ebe ahụ. A gaghịkwa enwe agadi nke na-akaghị ezigbo nká nwụọ. N’ihi na onye nwụrụ mgbe ọ dị otu narị afọ ka bụ nwata. Ọ bụrụgodị na onye mmehie dị otu narị afọ, ọ ga-anwụ n’ihi ọnụ a bụrụ ya. Ha ga-arụ ụlọ, birikwa na ha. Ha ga-akọ ubi vaịn, rie ihe si na ya. Ha agaghị arụ ụlọ, onye ọzọ ebichie ya, Ha agaghị akụ mkpụrụ, onye ọzọ erie ihe si na ya. N’ihi na ndị m ga-anọ ogologo ndụ otú osisi si anọ. Ndị m họọrọ ga-eji ihe aka ha rụpụtara mee ihe n’uju. Ha agaghị arụsi ọrụ ike na nkịtị, Ha agaghịkwa amụ ụmụ mụta nsogbu, N’ihi na ha na ụmụ ha Bụ ụmụ Jehova gọziri agọzi. Tupudị ha akpọkuo m, m ga-aza ha. Mgbe ha ka kpụ okwu n’ọnụ, m ga-eme ihe ha na-arịọ" (Aịzaya 65:20-24).
"Ka ahụ́ ya dị ọhụrụ karịa otú ọ dị mgbe ọ bụ nwata. Ka o nweghachi ike o nwere mgbe ọ bụ okorobịa" (Job 33:25).
"N’ugwu a ka Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-emere mmadụ niile Nnukwu oriri nke ha ga-eri nri na-edozi ahụ́ Na nnukwu oriri ha ga-aṅụ mmanya dị mma. Ọ ga-enyekwa ha nri ụmị anụ juru na ya, Nyekwa ha ezigbo mmanya a zara aza. N’ugwu a ka ọ ga-ebibi* ihe kpuchiri mmadụ niile Na ákwà a kpara akpa nke kpuchiri mba niile. Ọ ga-eme ka ọnwụ ghara ịdị ruo mgbe ebighị ebi. Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ga-ehichapụkwa anya mmiri dị n’ihu mmadụ niile. Ọ ga-emekwa ka a kwụsị imenye ndị ya ihere n’ụwa niile. Ihe a ga-eme maka na Jehova ekwuola ya" (Aịzaya 25:6-8).
"Ndị gị nwụrụ anwụ ga-adị ndụ. Ozu ndị m ga-ebili. Unu ndị bi n’ájá, Tetanụ tie mkpu ọṅụ, N’ihi na igirigi na-adasa gị dị ka igirigi na-ada n’ụtụtụ, Ala ga-emekwa ka ndị na-adịghị ndụ dịrị ndụ" (Aịzaya 26:19).
“Ọtụtụ n’ime ndị nwụrụ anwụ ga-eteta. Ụfọdụ ga-enweta ndụ ebighị ebi. Ma a ga-akọcha ndị ọzọ, ihere ga-emekwa ha ruo mgbe ebighị ebi” (Daniel 12:2)
"Ka ihe a ghara iju unu anya, n’ihi na oge na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu ya wee pụta. Ndị na-eme ezi ihe ga-enweta ndụ ebighị ebi, ma a ga-ekpe ndị na-eme ihe ọjọọ ikpe” (Jọn 5:28,29).
"Enwekwara m olileanya otú ndị a nwere, na Chineke ga-akpọlite ndị ezi omume na ndị ajọ omume nwụrụ anwụ" (Ọrụ 24:15).
Onye bụ Setan ekwensu?
Jizọs Kraịst kọwara ekwensu n’ụzọ dị mfe, sị: “Onye ahụ bụ ogbu mmadụ mgbe ọ malitere, o guzosighịkwa ike n’eziokwu n’ihi na eziokwu adịghị n’ime ya. Mgbe ọ na-agha ụgha, ọ na-ekwu ihe bụ́ uche ya, n’ihi na ọ bụ onye ụgha, bụrụkwa nna ụgha” (Jọn 8:44). Setan ekwensu bụ ezigbo mmụọ e kere eke (Lee ndekọ na Matiu 4:1-11). N'otu aka ahụ, ndị mmụọ ọjọọ bụ ndị mmụọ e kere eke aghọwo ndị nnupụisi na-agbaso ihe nlereanya Setan (Jenesis 6:1-3, iji tụnyere akwụkwọ ozi nke amaokwu Jud 6: "E nwekwara ndị mmụọ ozi na-anọgideghị n’ebe e dowere ha ka ha nọrọ, kama ha hapụrụ ebe ha kwesịrị ibi. O kere ndị mmụọ ozi a agbụ ebighị ebi ma dowe ha n’oké ọchịchịrị ruo mgbe ọ ga-eme ha ihe o kpebiri ime ha n’oké ụbọchị ahụ").
Mgbe edere ya “o guzosighịkwa ike n’eziokwu n’ihi na eziokwu adịghị n’ime ya”, oputara na Chineke kere mo-ozi a nenwegh nmehie. Mmụọ ozi a, na mbido ndụ ya nwere “aha mara mma” (Eklisiastis 7:1a). Agbanyeghị, ọ zụlitere mpako n'ime obi ya na oge na-aga ọ ghọrọ "ekwensu", nke pụtara onye nkwutọ na onye mmegide; aha ochie ya ochie, ezi aha ya ejiriwo ihe ọzọ nke ihere na-adịru mgbe ebighị ebi dochie anya ya. N’amụma Ezikiel (isi 28), gbasara eze mpako nke Taya, o doro anya na ọ na-ezo aka nganga nke mmụọ ozi ahụ ghọrọ “Setan”: “Nwa nke mmadụ, bụọ abụ iru uju banyere eze Taya. Sị ya, ‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: “I zuru okè na mbụ, bụrụ onye e ji ama atụ, Nwee ezigbo amamihe, mma gị abụrụkwa ebe mma ruru gwụ. Ị nọbu n’Iden, bụ́ ubi Chineke. E ji nkume niile dị oké ọnụ chọọ uwe gị mma. Ha bụ: rubi, topaz, jaspa, krisolaịt, ọnịks, jed, safaya, tọkwọiz, na emerad. Ebe a kwụnyere nkume ndị a nakwa oghere ndị ha dị na ha bụ ọlaedo. M mere ha n’ụbọchị m kere gị. Ị bụbu cherob e tere mmanụ, onye m họpụtara ka ọ na ekpuchi ihe. Ị nọbu n’ugwu nsọ Chineke. Ị nọbu na-ejegharị n’ebe nkume ndị na-acha ọkụ ọkụ dị. Ị na-akpa ezigbo àgwà mgbe niile malite n’ụbọchị e kere gị Ruo mgbe i bidoro kpawa àgwà ọjọọ"” (Ezikiel 28:12-15). Site n’omume na-ezighị ezi o mere n’Iden, ọ ghọrọ “onye ụgha” nke kpatara ọnwụ nke ụmụ Adam niile (Jenesis 3; Ndị Rom 5:12). Ugbu a, ọ bụ Setan na-achị ụwa: "A na-ekpe ụwa a ikpe ugbu a. Ugbu a, a ga-achụpụ onye na-achị ụwa a" (Jọn 12:31; Ndị Efesọs 2:2; 1 Jọn 5:19).
A ga-ebibi Setan kpam kpam: "Chineke, onye na-eme ka anyị nwee udo, ga-azọpịa Setan n’okpuru ụkwụ unu n’oge na-adịghị anya" (Jenesis 3:15; Ndị Rom 16:20).